Inona no atao hoe mampihena ny simenitra? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no atao hoe mampihena ny simenitra?
Ahitsio: Denny　2019-12-22　Mobile
Ny fantsom-panamboarana simenitra feno simenitra dia simenitra ao amin'ny simenitra, izay miorina amin'ny simenitra vita amin'ny gel-simenitra, vondron-jaza tsara, famenoana ary additives. Izy io dia karazana endrika vaovao izay afaka mivezivezy sy manenjana rehefa avy mifangaro sy mifangaro amin'ny rano. Ampitomboy ny fitaovana. Ny fatran-tena simenitra ny simenitra dia mizara amin'ny fantsom-pivarotan-tena ao amin'ny simenitra sy ny fananganana feta miorina amin'ny simenitra.
Ny fivoaran'ny tena simenitra ny simenitra dia karazana fitaovana simenitra-cement vaovao namboarina tamin'ny taona 1970 ary avy eo namboarina tamin'ny fitaovana hafa ho an'ny fananganana gorodona. Manatsara ny fisaka ny tany izy io, ary afaka manamboatra mora foana ny fanodinana sy ny fanimbana izay mora aroso amin'ny tany mahazatra.
Ny fitran-tena simenitra ny simenitra dia manana rano mavesatra sy miorina tsara, mizaka tena, tsy misy vovoka, tsy mikoropaka, manamboatra tsotra sy haingana, hamafin'ny asa mafy, malama sy malama, ary manana tanjaka avo sy fanoherana ny rano tsara; azo ampiharina amin'ny Fananganana trano maro hafa sy ny sisa. Ampiasaina be amin'ny hopitaly, orinasa, toeram-pivarotana, trano fivarotana, fivarotana varotra, efitrano fampirantiana, efitrano fanatanjahan-tena sy trano, birao, sns….
Inona no atao hoe mampihena ny simenitra? Ny atiny mifandraika